Jorge Sampaoli oo cabsi ka muujiyay awooda Real Madrid ka hor kulanka Super Cup-ka – Gool FM
Jorge Sampaoli oo cabsi ka muujiyay awooda Real Madrid ka hor kulanka Super Cup-ka
Liibaan Fantastic August 8, 2016
(Sevilla) 08 Agoosto 2016 Tababaraha kooxda Sevilla Jorge Sampaoli ayaa ka hadlay kulanka adag ee habeen dambe ay kooxdiisu ka horjeedo kooxda Real Madrid Final-ka Super Cup-ka yurub.
Jorge Sampaoli ayaa sheegay in maqnaashaha qaar kamid ah ciyaartoyda Real Madrid aysan hoos u dhigi doonin awoodooda, wuxuuna intaa ku daray in kooxdiisu ay isku dayi doonto guul ay ka gaarto kooxda macalin Zidane.
Ronaldo, Bale, Kroos iyo Pepe ayaa si rasmi ah loo xaqiijiyay inay seegi doonaan kulanka habeen dambe ee Real Madrid iyo Sevilla.
“Marwalba waxaa fiican inaad guulaysato marka aad ciyaarayso kulamadaan oo kale, laakiin waxa muhiimka noo ah kulanka barri ayaa ah inaan gogoldhig fiican u samayno xiliciyaareedka cusub, waxaan doonaynaa inaan fulino wixii aan baranay” ayuu yiri Jorge Sampaoli.
“Real Madrid? waxay laciyaareen kooxo waa wayn kulamadii isdiyaarinta guulo ayeeyna ka gaareen, waa inaan sifiican u eegnaa waayo waxay haystaan ciyaartoy fiican”.
“Ma ahan inaan hoos u dhigno awoodooda ciyaartoyda ka maqan dartood, waxaan jeclahay inaan arko kooxdayda oo ku ciyaaraysay xamaasad aad u badan”.
“Waxaan doonaynaa inaan ku guulaysano Super Cup-ka yurub, waan u dagaalami doonaa natiijada aan doonayno inaan helno”.
Pogba oo ku baasay tijaabada caafimaad iyo Man United oo berito…
EEG SAWIRKA: Pogba oo xiran maaliyada Man United